Friday 30th August 2019 08:40:18 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
28-kii sano ee ugu dambeeyay ummadda JSL waxay haysteen oo ay ku naaloonayeen nabad buuxda
iyo deggenaansho. Sidoo kale waxa jira horumar la taaban karo oo dhinacyo badan leh. Waxa kale oo aynu qaadanay nidaamka dimuqraadiyadda iyo hannaanka xisbiyada badan, dalkana waxa ka qabsoomay doorashooyin kala duwan oo lagu tartamay. Arrimahani waa KARTI IYO AWOOD SHACAB oo aad u qiimo badan oo aynu ummad ahaan ku faani karno, isla markaana ay waajib inagu tahay in aynu ALLAH (SWT) uga mahad-naqo. Shacabka karaamada leh ee JSL ayaa iyagu hore iyo haatanba ahaa kuwa arrimahan saldhiga iyo laf-dhabartaba u ahaa.
Haddaba, waxa nasiibdarro ah in 28 sano ka bacdi, horumar kasta oo uu Qarankeenu ku tallaabsado ay weli daboolayaanTabashooyin Beelaysan oo salka ku haya inaan Beesha Reer-hebel xukuumadda ka helin sadkii iyo saamigii ay xaqa u lahaayeen. Miyaanay nasiib darro inteeda leeg ahayn marka daryeelka danaha Qabiilka laga horraysiiyo dananaha guud ee ummadda iyo halka ay maslaxadda Qaranku ku jirto??!!
Midnimada iyo Wadajirku Bulshadu waaawoodiyo cudud adag oo aan la loodin karin oo ay ummad kastaba iskaga difaaci karaan cadawgooda noocyada badan leh. Midnimada iyo Wadajirku waa duxda iyo nafaqada kobcisawax-wada-lahaanshaha, is-aaminaada iyo kalsoonida ay shacabku dhexdooda isku qabaan. Midnimada iyo Wadajirkuwaa dabarkaisku haya jiritaanka iyo ahaan-shaha ummadnimo taasoo kobcisa dareen-wadareedka guud eeshacabka.
Xukuumadda waxa waajib ku ah inay si dhab ah u dareento mushkiladaha ka dhalan kara kala-qaybsanaanta iyo kala-furfurka Bulshada. Xukuumadda wax dan ahi uguma jirto kala-qaybsanaanta iyo tafaraaruqa ummaddeeda.Ummadda oo isku duuban oo mid ah ayaa Xukuumadda lafteeda danteedu ku jirtaa, waayo waxay si fudud u hirgelin kartaa qorsheyaasha horumar iyo kuwa siyaasadeed ee ay leedahay.
M/weyne Muuse Biixi Cabdi iyo Xukuumadiisawaxa la gudboon inay dedaal dheer oo qorshaysan u gasho sidii loo midayn lahaa ummadda JSL isla markaana loo adkayn lahaa wadajirkooda. Xukuumaddu waa inay la timaado aragti, hal-abuur iyo barnaamijyo tayo leh oo kor loogu qaadayo Garaadka iyo Dareenka Waddaninimo, Wadajirka iyo Ahaanshaha Ummadnimoee bulshada JSL, gudaha iyo dibeddaba.
Ummad ahaan, haddii aynu doonayno inaynu ka rumayno himilada iyo hadafka Qarannimo ee aynu leenahay, waa in aynu ka gudubnoisku-muuqashada iyo in aynu inagu dhexdeena isku mashquullo. Waa in aynu ka feejignaano wax kasta oo carqalad ku keeni kara ahaanshaheena ummadnimo, wada-jirkeena, isku-duubnideena iyo qiimaha ay Qarannimadu leedahay.
Guntii iyo gabagabadii, xalka keliya ee lagaga gudbi karo marxaladan adag iyo xaaladaha cakiran ee waqtigan xaadirka ah ka jira Dalkeenawaa: ADKAYNTA MIDNIMADA IYO WADAJIRKA UMMADDA JSL. Taasina waxay ku iman kartaa Wada hadal, Is-qancin,Wada-tashi,Tudhaale & Isu-tanaasul, Caddaalad & Sinnaan, iyo in si Siman loo wadaago Dheefta iyo Khayraadka Qaranka!!
Xoogagga Ciidamada Xaftar Oo XukuMmadda Ka Qabsaday Magaalada Sirte Ee Dalka Liibiya.
[Daawo:-] Dhoollatuska wadajirka ah ee Dawladaha Dalalka Iran, Ruushka Iyo Shiinaha Oo Mareykanku La Yaabay
Shirkadda GTS Oo Soo Dhaweysay Go'aankii Xukuumaddu kula Wareegtay Buugga Dhaq-dhaqaaga Gaadiidka iyo Summadda Tirs
[War Hadda Soo Dhacay:-] Xukumada Somaliland Oo La-wareegtay Buugga Dhaq-dhaqaaga Gaadiidka iyo Summadda Tirsiga Gaadiid
[DAAWO:-] Khudbadii Guddoomiye Faysal Cali Waraabe Ee Xafladii Xoojinta Midnimada Iyo Isu Soo Dhaweynta Jaaliyadda
Gudoomiyaha Xisbiga WADDANI Oo War Kasoo Saaray Dadka Fatahaada Ka Dhacday Baladwayne & Baaq Uu Ummadda U Diray [Gud
Guddoomiyaha Xisbiga Ucid Eng Faysal C Waraabe Oo Qaaradda Yurub Ka Bilaabi-doona Socdaal La Magac-baxay,["Socdaal